Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा – Emountain TV
गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा
काठमाडौ, ८ जेठ । मुलुकमा २३ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छन् । आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा तदारुकता नदेखाउदा आयोजनाहरु अलपत्र अबस्थामा छन ।
लामो समयदेखि निर्माण थालिएका २१ वटा गौरवका आयोजनामध्ये ११ वटा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । नेपाली सेनाले ठेक्का लिएको ७२ किमि लामो काठमाडौं–तराईमधेस द्रुत मार्गका प्रगति ७ प्रतिशत मात्रै छ ।
०७४ जेठ १४ मा शिलान्यास भएको यो सडकको साढे चार बर्षभित्रमा निर्माण सक्नुपर्नेछ । त्यस्तै ०४४ सालमा सुरु बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । यो पुरानो आयोजना हाे । सबैभन्दा पुरानो लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष रहेको छ । ०४२ सालमा सुरु आयोजनाको हालसम्म प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यस्तै निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना समयमै निर्माण नहुँदा अलपत्रजस्तै बनेका छन । पुराना आयोजनाको समय थप गरिए पनि काममा भने सोचेअनुरूपको प्रगति हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो पटक सरकारले ४०० केभी क्षमताको नाङ्लेभारे–बुटवल प्रसारण लाइन र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको भए पनि ती आयोजनाको भने काम शुरु भइसकेको छैन ।
त्यस्तै निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेसम्म प्रगति नै देखिएको छैन । कूल २३ वटा गौरवका आयोजना मध्ये माथिल्लो तामाकोशी, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रि विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन क्षमताको अभाव देखिएको विज्ञहरू नै बताउँछन् ।
यी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न कोशेढुंगा मात्रै नभई नेपालीको जीवनस्तरमा यसले कायापलट ल्याउने छ ।
ठूला आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याई आफ्नै स्रोतसाधनमा समयमै सम्पन्न गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुने सरोकारवालाको भनाई छ ।